FITSARAM-BAHOAKA : « Mety avy amin’ny fihetsiky ny polisy », hoy i Anandra Norbert | NewsMada
FITSARAM-BAHOAKA : « Mety avy amin’ny fihetsiky ny polisy », hoy i Anandra Norbert
Tahaka izao no ataon’ireo polisy amin’ny andro amin’ny 9 maraina. (Sary nindramina)
Manoloana ireo trangana fitsaram-bahoaka maromaro niseho teto Madagasikara tato anatin’ny fotoana maromaro izay, niantso ireo polisy am-perinasa ny minisitra Anandra Norbert fa sao avy amin’ny fitondran-tenan’izy ireo no mahatonga izany. Fiampangan-tena sa antony hafa ? ireny efa niaraha-nahita ireny mantsy ny fihetsika nataon’ny sasany tamin’ireo polisy…
Fiampangan-tena ?, izay no azo ambara manoloana ny fanambaran’ny minisitry ny filaminam-bahoaka, ny controleur général de police Anandra Norbert, tany Antsirabe mikasika ny fiantsoana fandihan-tena ho an’ny polisim-pirenena eo anatrehan’ny fitsaram-bahoaka nisesisesy teto Madagasikara tao anatin’ny fotoana maromaro izay nandritra ny firesahany tamin’ny mpanao gazety nataony taorian’ny famoahana ireo mpianatra teo anivon’ny ENIAP ny zoma lasa teo.
« Aoka isika samy andini-tena satria mety noho ny fitondran-tenantsika polisy no mahatonga ireny tranga fitsaram-bahoaka ireny », hoy ny nambaran’ity minisitra sady tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny polisim-pirenena ity.
Fitondran-tena tsy mety ?. Matetika, saika ahitana sarina polisy manao ny tsy fanao hatrany any anaty tambazotran-tserasera, toy ny polisy manao fanamiana mividy labiera any anaty « bar ». Nefa tamin’ity antso avo nataon’ny minisitra ity dia ireo polisy amperin’asa no tena notsindriany tamin’izany.
Tsy fahatokisana ?
Raha ny tranga nisy tato anatin’ny volana vitsivitsy, sarotsarotra ny hamerenan’ny vahoaka ny fahatokisany indray amin’ny polisim-pirenena. Manoloana ny fikasihan-tànana nahazo ny mpanao gazety Rabarijaona Tsirava, toa mangina tanteraka hatramin’izao ity raharaha ity na dia nampanantena aza ny polisim-pirenena fa hitady ny marina. Torak’izany ihany koa ilay raharaha nahafaty an’i Jean Kely tetsy Sabotsy Namehana. Ilay fitifirana olona mbola ahiahiana ho jiolahy tetsy Antanimena sy ny maro hafa.
Nilaza ity minisitry ny filaminam-bahoaka ity fa « efa nisy ny fepetra noraisina manoloana ny fitondran-tenan’ny polisy manokana amin’izao fotoana izao ». Andrasana araka izany izay ho vokatr’io fandraisana fepetra io na dia tena arahin’asa tokoa na ho lasa am-bava fotsiny toy ny efa nisy teo aloha.